Mareykanka oo cadaadis saaraya Suudaan - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Mareykanka oo cadaadis saaraya Suudaan
Sida ay sheegtay warbaahinta dowlada Suudaan Wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo madaxa golaha talada haya ee Suudaan ayaa u safray dalka Isutaga Imaaraatka carabta si ay wadahadalo ula yeeshaan saraakiisha Imaaraatka iyo Mareykanka, oo ay kamid tahay ka saarida liiska dalalka uu Mareykanku u aqoonsaday inay maalgeliyaan argagixisada.
Dowlada ayaa sheegtay in General Abdel-Fattah al-Burhan, uu wadahadallo la yeelan doono hoggaanka Imaaraadka iyo Mareykanka.
Shabakadda Axios oo aan soo Xiganay ayaa warisay in saraakiisha Mareykanka, Imaaraatiga iyo Suudaan ay shir “go’aan” leh ku qaban doonaan Abu Dhabi, Halka Warar Hoose ay sheegayaan in uu ku Saabsanyahay Hishiis Caadi ah oo Dhexmara Dowlada Suudaan iyo Israa’iil.
Bishii Ogosto, Xoghayaha arrimaha dibedda ee Mareykanka Mike Pompeo, ayaa waxaa uu soo qaaday arrinta ku saabsan in Suudaan ay xiriir la sameyso Israa’iil, kadib booqasho uu ku tagay Khartuum.
Dhanka kalane Isaga oo ka jawaabaya, Ra’iisal wasaaraha Suudaan Abdalla Hamdok ayaa sheegay in dowladiisu aysan haysan wax amar ah oo ay ku sameyso arintaas, talaabadaas oo kalena la go’aamin karo kadib marka uu dhamaado xilliga kumeelgaarka ah iyo qabashada doorashooyinka ee Sanadka 2022-ka.
Wasiirka Caddaaladda Suudaan Naser-Eddin Abdelbari ayaa la kulmi doona saraakiisha Mareykanka ee jooga Abu Dhabi, iyagoo usoo Bandhigi Sidii Xukuumada Khartuum Looga Saari Lahaa liiska dawladaha taageera argagixisada oo Marekanku uu ku daray Suudaan Sanadkii 1993-kii.
Todobaadyadii aan kasoo Gudubnay Waxaa Hishiisyo Caadi ah oo uu Mareykanku dhexdhexaadinayay Israa’iil Lawada Galay Dowladaha Imaaraadka iyo Baxreyn.
Previous articleDHAGEYSO: Barnaamijka Barakacayaasha 21-9-2020
Next articleBeesha Caalamka oo War kulul kasoo saartay heshiiskii doorashada